आजकल कलिउडदेखि बलिउडसम्मका सेलिब्रेट्रीहरु अन्डरवेयर नलागाइ कार्यक्रममा जान्छन् ! लगाउँदाका यस्ता छन् ५ अविश्वनिय फाइदाहरु – ताजा समाचार
आजकल कलिउडदेखि बलिउडसम्मका सेलिब्रेट्रीहरु अन्डरवेयर नलागाइ कार्यक्रममा जान्छन् ! लगाउँदाका यस्ता छन् ५ अविश्वनिय फाइदाहरु
भित्री लूगा (पेन्टी) नलगाउँदा कि त निकै रमाइलोको पात्र बनिन्छ या अनावश्यक जोखिम उठाउनु पर्ने हुनसक्छ । विशेष रुपमा महिलाहरुले पेन्टी लगाउने गर्छन् । अन्यथा थुप्रै समस्याहरु झेल्नु पर्ने हुनसक्छ । पछिल्लो समय हलिउड बलिउण्डमा नायिकाहरुले भूलेर वा चर्चा कमाउनकै लागि पेन्टी नलगाई सार्वजनिक कार्यक्रममा गए । किन लगाइन्छ त अण्डरवेयर
केही महिला शारिरिक सम्बन्धको अपिल बढाउन कमाण्डो स्टाइलमा हिड्छ । ता कि आफूले देखेर अरु आकषिर्त होउन् भन्ने उनीहरु चाहन्छन् । अण्डरवेयर लगाउनुको सबैभन्दा फाइदा यो हो कि तपाईमा घरबाहिर रहँदा सहज र आत्मविश्वास हुन्छ ।
यसले कुनै पनि प्रकारको बडी डिस्चार्ज अर्थात शरीरबाट निस्कने फोहोरबाट अन्य कपडालाई बचाउँछ । अण्डरवेयर मात्र धोए पुग्छ । बाँकी कपडा सुरक्षित राख्छ ।
समाजका लागि पनि राम्रोः
माथी उल्लेख भएजस्तै विना पेन्टी सार्वजनिक कार्यक्रममा पुग्दा सेलिब्रेटीहरुले विभिन्न समस्या झेल्नु परेको छ । त्यसले यसले के देखाृउँछ भने महिलाहरुलाई विना अन्तरवस्त्र समाजले स्वीकार गरिसकेको छैन ।
जिपर कहिले काँही तपाईको महत्वपूर्ण र संवेदनशील अंकका लागि घातक हुनसक्छ । अण्डरवेयर लगाएको अवस्थामा त्यो खतरा धेरै हदसम्म रहँदैन ।
हामी उहाँ कुनै कार तथा सवारी दुर्घटनाको कुरा गरिरहेका छैनौं । यदि तपाईको पाइन्ट फुट्यो वा च्यातियो भने हुने लाजमर्दो अवस्थाबाट अण्डरवेयरले बचाउँछ । भास्कर दैनिक